Ogaden News Agency (ONA) – Arimihii ugu mudnaa in aan idinla wadaago iyo qayba ka mid ah dhagaysi
Arimihii ugu mudnaa in aan idinla wadaago iyo qayba ka mid ah dhagaysi
Posted by ONA Admin	/ August 29, 2013
Si guud hadaan uga waramo Kal-fadhigii 6xaad ee golaha dhexe waxaan ku tilmaami karaa inuu ahaa mid guul ku soo dhamaaday. Ugu horeyn waxaa soo xaadiray 95% xubnnaha Golaha Dhexe, gude iyo dibadba, taasoo muujinaysa ahmiyadda ay mudanayaasha siinayeen kal-fadhiga, iyo hamiga ay la soo xaadireen. Marka laga yimaado ajendaha uu Gudiga Fulinta soo hordhigay kal-fadhiga, waxaa muhiim kale lahaa is-aragga gooni goonida ah ee xubnaha iyo hogaanada. Sidoo kale is-araga xubnaha gudaha ka hawl-galayay iyo kuwii dibadda oo is-dhaafsanayay markasta oy fursad isu helaan waaya-aragnimadooda iyo fikradaha lagu horumarin karo halganka ka kala socda gudaha iyo dibadda iyo sidii loo xoojin lahaa iska warqabkooda.
Arimaha sida gaarka ah ii soo jiitay waxaa ka mid ahaa khudbad dheer oo Gudoomiyaha Jabhadda uu ku furay Kal-fadhiga oo weeleysay xaaladaha uu ku sugan yahay halganka iyo duruufaha ku xeeran. Hadalka Gudoomiyaha oo qoraal ahaan u diyaarsanayd ayuu gudoomiyaha kaga warbixiyay xaaladda guud ahaan uu ku sugan yahay halganka shacabka S.Ogadenya isagoo ku salaynayay xeerka asaasiga ah ee jabhadda iyo waxqabadkii ururka intii u dhexaysay labada kal-fadhi. Waxaa ka mid ahaa khudbada furitaanka Gudoomiyaha hadaladan;
1. Qayb hadalkii Gud.
Kal-fadhigan wuxuu ahaa mid si aad ah loogu xisaabtamay oo hogaan walba ay xubnaha si gooni ah ula xisaabtameen, waxaana meesha laga saaray in danta guud looga xishoodo madaxda kolba midka taagan madasha. Waxaa kaloo la qiimeeyay guud ahaan waxqabadka Golaha Dhexe oo dhaliilaha ka muuqda farta la saaray, ugu dambayna waxaa loo saaray guddi gaar ah oo ka soo talabixiya sidii loo dardargalin lahaa waxqabadka mudanayaasha Glaha dhexe. Waxaa kaloo jiray dacwado si gaar ah loo qaaday oo go’aanadii ku haboonaa laga gaadhay. Sidoo kale gudiyo farsamo oo loo saaray waxqabadka Hogaanada ayaa barbar socday, oo keenay in dibu habayn lagu sameeyay qaarkood.
Waxyaabaha sida aadka ii soo jiitay waxaa ka mid ahaa sheekooyinka taariikhiga ah ee xubnihii goobjoogaha ka ahaa ay kolba soo goconayeen oo markay ka xog-waramayaan iyaga iyo inta dhagaysanaysaba ay uga Mahadnaqayeen Ilaahii ka soo gudbiyay marxaladahii uu soo maray halganka. Waxaa sidoo kale i soo jiitay wacdiga ay xubnaha is-dhaafsanayeen Salaada Fajar iyo cadceed soo baxa u dhaxaysa oo inta ugu badan ay jeedinayeen Xaaji C. Ciraaqi iyo Xaaji Diirane oy u koomaalayeen Jen. Cabdulaahi Muqtaar iyo Gud. Ku-xigeenka iyo gaar ahaan mudanayaasha gudaha ka yimid oo kolba soo xasuusanayay mucjisooyin badan oy goob jooge ka ahaayeen. Waxaa ka mid ahaa wacdi aan kaydiyay oo aadan ka xiisa dhacaynin midkan;
Ugu dambayntii waxaa xubnaha ay aad uga murugoodeen kolkii uu mudane Cabdiraxmaan cagoole codsaday in laga aqbalo istiqaalada isagoo asaas uga dhigay duruuftiisa caafimaad iyo halgankii oo soo balaadhay iyo masuuliyadiisa oo u baahan hadda wixii ka dambeeya dheq-dheqaaq joogta ah. Waxay ahayd munaasabad ay xubna badan oo isaga uu ka mid ahaa ay xakamayn kari waayeen caadifadooda oy ilma iska tirayeen. Waxaa Shirka lagu go’aamiyay si wadajir ah in la gudoonsiiyo mudane Cabdiraxmaan Shahaada sharafta Golaha Dhexe markii ugu horeysay taariikhda Kal-fadhiyada Golaha Dhexe.
Waxaan idiin soo gudbin doonaa khudbadii Gud. ee xidhitaanka Kal-fadhiga iyo kolba wixii xusuutayda ku soo dhaca. Ugu dambayntii, waxaan halkan uga hambalyaynayaa xubnaha cusub ee ku soo biiray Golaha Dhexe oo lagu soo doortay hab loo bogay oo mudanayaasha ay si aqlibiyad ah ugu codeeyeen.